Chrysoprase okwute putara. A na-ejikarị ụdị okwute na - achọ mma - vidiyo
okwute chrysoprase. Chrysoprase cabochon gemstones bụ ndị a na-ejikarị maka ịchọ mma: mgbanaka, olu, ọla ntị, beads, mgbaaka, pendant.
Chrysoprase, nke a na-akpọkwa agate green dị ka aha azụmaahịa bụ gemstone dị iche iche chalcedony, ụdị silica cryptocrystalline nke nwere obere nickel. Agba ya na-achakarị acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mana ọ na-agbanwe dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ miri emi. A na-akpọkwa ụdị chrysoprase ọchịchịrị karịa dị ka prase. Agbanyeghị, a na-ejikwa okwu ahụ praịsis kọwaa klorite gụnyere quartz, ma ruo n’ókè ụfọdụ, ihe na-egosi agba agba, kama ịkọwa ụdị ịnweta dị iche iche siri ike.
Chrysoprase bụ cryptocrystalline, nke pụtara na ọ bụ nke kristal dị mma nke na a pụghị ịhụ ha dị ka ihe dị iche iche dị ka ihe dị mma. Nke a na-eme ka ọ dị iche iche na nkume crystal, amethyst, citrine, na ụdị ndị ọzọ nke quartz cristalline. Ndị ọzọ nọ na silica ezinụlọ Cryptocrystalline gụnyere agate, carnelian, onyx. N'adịghị ka ọtụtụ mineral silica ndị na-abụghị ndị na-abụghị ndị na-abụghị ndị na-abụghị ndị na-abụghị ndị na-abụghị ndị na-abụghị ndị na-adịghị ahụkebe, ọ bụ agba nke chrysoprase, kama nke ọ bụla ụdị akara, nke na-eme ka ọ dị mma
N'adịghị ka emerald nke na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ya na ọnụnọ nke chromium, ụcha bụ n'ihi nchịkọta nickel ogige dị ka obere ntakịrị. Nickel a na-akọ na ọ bụ dịka silicates dị iche iche, dị ka nke na-eme ka ọ dị elu ma ọ bụ pimelite, ọ bụghị Niral mineral, bunsenite, dị ka a kọrọ na mbụ. Ọ na-esite na mmiri na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-emechi ndị agwọinite nickeliferous ma ọ bụ nkume ndị ọzọ ophiolite. Na nkwụnye nke Australian, ọ na-eme dị ka veins na nodules na-agba agba aja na ígwè oxides ndị ọzọ na magnesite rich saprolite n'okpuru ígwè na silica okpu.
Dị ka ụdị chalcedonia nile, chrysoprase nwere ike nke 6 ka 7 na oke ike nke Mohs na mgbagha dị ka nkume.
Ebe kachasị mara amara nke chrysoprase bụ Queensland, Western Australia, Haneti Tanzania, Germany, Poland, Russia, Arizona, California, na Brazil. Enwe ego na Central Tanzania anọwo na arụ ọrụ mgbe niile kemgbe 1986. Nkume na silk na silk na Silk na Szklary, Lower Silesia, Poland, ma eleghị anya ọ bụ nnukwu nkume Europe na ikekwe ọ bụkwa nnukwu ihe dị n'ụwa.
Otu ịnweta ihe yiri ya bụ chalcedony chrome, nke na - enye chromium karịa nickel.
Oxide mineral, otu nkewa
EMM :AKA: silica (silicon dioxide, SiO2)
AKNDKỌ NIILE: 2.58 – 2.64
AKW BKWỌ AKWXKWỌ: + 0.004
RAB SPR SP SPECIFIC: 2.58 - 2.64
Chrysoprase na-agwọ Njirimara
Akụkụ na-esonụ bụ pseudo sayensị ma dabere na nkwenye ọdịbendị.
Ejiri okwute chrysoprase gbaa ndi mmadu ume ka ha nwee nchekwube na obi uto. Ọ na - ewetara ọfụma na ụba n'ụba na mmekọrịta ọhụụ.
Ọ bụrụ na Chrysoprase kristal achọtarala ndụ gị, were ya dịka ihe ama na-egosi na ọ dị gị mkpa inwe mmegharị ahụ nke mmụọ. Mara maka igosipụta nchekwube, ọ joyụ, na obi ụtọ, ihe mkpuchi kristal Chrysoprase bụ otu n'ime usoro ọgwụgwọ kachasị mma n'ụwa nke ọgwụgwọ kristal. Ọ bụrụ n’inyocha ndepụta ọrịa ọrịa obi dị iche iche dịka ịda mba, obi erughị ala, na nrụgide, Chrysoprase kristal bụ ọgwụ dị mma maka ịkwalite echiche ka mma na ndụ. Debe okwute a na nkuku gị ma cheta ile anya n'akụkụ niile na-enwu gbaa, ọbụlagodi n'oge igwe ojii.